Ganacsato Soomaali ah oo ka qeyb galeysa shir caalami ah oo maanta ka furmaya magaalada London | Salaan Media
Ganacsato Soomaali ah oo ka qeyb galeysa shir caalami ah oo maanta ka furmaya magaalada London
Iyadoo magalaada London ee dalka Ingiriiska lagu soo gebageeyey xalay shir caalami ah oo lagu taageerayey Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka furmaya shir kale oo loogu qaban doono magaalada London ganacsato Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka kala yimid.
Waxaa shirkaasi looga hadli doonaa sida la sheegay doorka ganacsatadu ka qaadan karto maalgashi laga hirgaliyo dalka Soomaaliya iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya.
Sida warku sheegayo shirka ganacsata Soomaliyeed oo ay ka qeybgalayaan ganacsato kale oo ka socota dalal daneynaya maalgashaiga dalka soomaaliya iyo xubno ka socda bankiga adduunka ayaa sidoo kale looga hadli doonaa qaabka loo hormarin karo ganacsiga Soomaaliya iyo in shaqooyin laga abuuro dalka kadib marka laga hirgeliyo mashaariic kala duwan sida ay sheegeen xubno ka qeybgalayaasha shirkaasi.
Dhinaca kale saraakiil ka kala socota Midowga afrika iyo AMISOM ayaa iyaguna shir gaar ah ku yeelanaya magaalada London 9-ka ilaa 11 bishan, waxaana Shirkan soo abaabulay oo qabanqaabadiisa leh AMISOM, waxayna ku sheegtay mid ay ku xoojinayso isdhex galka bulshada iyo xiriir wanaagsan oo ay la samaynayaan bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan.
AMISOM waxay leedahay, waan hananay quluubta iyo aaminaadda shacabka gudaha Soomaaliya ku nool, laakiin markani waxaa la joogaa markii aan dumi lahayn kuwa qurbaha u yaacay, shirkan ay AMISOM soo abaabushay ayaa waxaa ka soo qayb galaya oo lagu casuumay aqoonyahanno Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhaqan, lamana ogga ajandaha dhabta ah ee ka danbeeya shirka, marka laga reebo wararka hordhaca ah ee AMISOM ku sheegtay inay ku doonayso inay ku xoojiso xiriirka Qurbejoogta iyo kan AMISOM.